सामूहिक निर्णयमा अघि बढ्छुः नवनियुक्त आइजिपी अर्याल
प्रकासित मिति : २०७३ चैत्र ३०, बुधबार प्रकासित समय : ०७:४४
काठमाडौँ । नवनियुक्त आइजिपी अर्यालले सामूहिक निर्णयबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संगठनलाई बलियो बनाउन सबैजना ऐक्यबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार बिहान प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा निर्देशन दिँदै उनले भने–‘संगठनप्रतिको विश्वास अझै उँचो पार्ने पवित्र कार्यका लागि म र मेरो भन्ने भावनालाई त्यागेर सामूहिक निर्णयले संगठन अघि बढ्नुपर्छ र सदस्यको बृहत्तर हितका लागि सबैलाई ऐक्यबद्ध हुन आग्रह गर्छु ।’
मुलुक चुनावको मुखमा रहेकाले निर्वाचन, संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयन प्रहरीको गहन जिम्मेवारी रहेको उनले बताए ।
सोमबार दिउँसोसम्म डिआइजी प्रकाश अर्यालका लागि एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल संगठन प्रमुख थिए । अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखका रूपमा सलाम गर्दै अर्यालले डा. पोखरेललाई आफ्नो विभागको ब्रिफिङ गर्दथे ।
तर, बेलुका अर्याल प्रहरी मुख्यालय पुग्दा उनै डा. पोखरेलले अर्याललाई सलाम गरे । साँझ सरकारले अर्याललाई आइजिपी नियुक्त गरेको थियो । जसका कारण अर्याल पोखरेलका हाकिम बनिसकेका थिए । प्रहरी इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक यस्तो दृश्य देखिएको थियोे ।
आइजिपी बढुवाको विवादले यस्तो अवस्था आएको थियो । सरकारको निर्णयलाई अदालतले रद्द गरिदिएपछि प्रहरी अस्पतालका एआइजी पोखरेललाई सरकारले गत २ फागुनदेखि निमित्तको जिम्मेवारी दिँदै आएको थियो ।
सोमबार सरकारले अर्याललाई आइजिपी बनाएपछि उनी प्रहरी अस्पताल फर्किएका छन् । सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेकोमा गत ८ चैतमा सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय रद्द गरेको थियो ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि सरकारले अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर धेरै भएको भन्दै उनलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
अर्याललाई आइजिपी बनाएपछि डिआइजी नवराज सिलवाल फेरि अदालत गएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर सबैभन्दा धेरै आफ्नो भएको दाबी गर्दै उनले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
अन्य दुई डिआइजीले भने अर्याललाई साथ दिएका छन् । यसअघि सरकारले आइजिपी बनाउने निर्णय गरेका जयबहादुर चन्दले अर्यालको बढुवाप्रति सहमति जनाउँदै मिलेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अर्यालको निर्देशन कार्यक्रममा सहभागी भई उनी प्रहरीको पोलिसी को–अर्डिनेसन कमिटीको बैठकमा सहभागी भए । ‘चुनावको मुखमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण संगठनलाई बन्धक बनाउनुहुँदैन,चन्दले भने–‘प्रकाश पनि हाम्रै साथी हुन्, हामी मिलेर संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’
त्यस्तै, आइजिपी बढुवाका अर्का प्रतिस्पर्धी बमबहादुर भण्डारीले पनि अर्याललाई बधाई दिएका छन् । डिआइजी सिलवाल भने अर्यालले बोलाएको बैठकमा गएनन् ।
सरकार र गृह मन्त्रालयले आफ्नो पेसागत निष्ठा, व्यावसायिक क्षमताको मूल्यांकन गरी महानिरीक्षक बनाएकोमा उनले धन्यवाद दिएका थिए ।
कार्यक्रममा एआइजी डा. पोखरेलले अर्याललाई बधाई र शुभकामना दिएका थिए । अर्यालले मंगलबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि तथा गृहका अधिकारीहरूलाई औपचारिक भेट गरेका थिए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।